35KV awood transformer
transformer daawaha Amorphous
nooca Box transformer
transformer nooca Dry
S13-mrl core xagalka transformer
Ku soo dhawoow Si Tha
Jiangsu Tianhua transformer Co. Ltd. Ma ganacsi farsmada heerka sare ah ee gaarka u ah wax soo saarka, horumarka iyo iibinta gudbiyeyaasha iyo badeecadaha la xiriira. Company waxa uu ku yaalaa magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Jiangsu, xarun gaadiidka qaran oo dhamaystiran, bari Shiinaha sayniska iyo waxbarashada muhiim ah, dhaqanka, maaliyadda, dalxiiska, daryeelka caafimaadka, heshiiska iyo xarunta bandhiga, xarunta dhaqaalaha, ganacsiga iyo ganacsi oo muhiim ah ee gobolka Jiangsu, Xuzhou magaalada, tareenka Beijing-Shanghai iyo tareenka Longhai ee isgoyska this, ee mara Eurasian buundada qaaradda ee Xuzhou, gaadiidka waa mid aad u sahlan.
maalgashiga guud ee shirkadda yahay 258 milyan oo Yuan, iyadoo caasimada diiwaangashan 55 milyan oo Yuan. Shirkadda ayaa 270 shaqaalaha, oo ay ku jiraan 7 engineers.More sare oo ka badan 110 shaqaale sare oo ka tirsan farsamo sida dhakhtar oo sayidkaagii degree.Since shirkadda la aasaasay, si adag u raacaan nidaamka maaraynta tayada ISO9000 Oo siiyaan macaamiisha la soo saarka tayo wanaagsan leh in la kulmaan astaamaha kasta gobolka.
Waxaan si wadajir ah ula macaamiisha la technology advanced, qalabka fasalka-koowaad, tayo wanaagsan leh, adeeg lagu qanci karo iyo sumcad wanaagsan, doondoonaan horumarinta caadiga ah, si daacad ah soo dhaweyn dadka ka soo dhammaan qaybaha nolosha in koox u yimaado oo aan si ay ugala hadlaan iskaashi, abuuro cajiib!
Macaamiisha: si ay u siiyaan macaamiisha badeecooyinka iyo adeegyada of tayo sare leh oo qiimaha ugu badnaan xirfadeed inuu ku guuleysto macaamiisha waxgarasho, ixtiraam iyo taageero la daacadda iyo xoog.
Shaqaalaha: shaqaalaha trust 'dadaalka iyo daahirinteeda, qirayaa shaqaalahooda' guulihii iyo wixii ay bixiyaan dhiganta celinta, iyo in la abuuro jawi shaqo oo wanaagsan iyo rajada horumarka shaqaalahooda.
Suuqa: si loo yareeyo kharashka soo iibsiga iyo halista macmiisha, iyo in la siiyo garantii dhabta ah ee maal-gashiga macaamiisha.
Horumarinta: eryan gool horumar waara iyo in la dhiso on qancinta macaamiisha.
ruux Enterprise: isku kalsooni, is-anshaxa, is-tiirsanaanta iyo is-hagaajinta.
On Job The
105 Xuhai Road, Horumarinta Dhaqaalaha Xuzhou Zone Jiangsu Shiinaha
Oil transformer, 5000kva transformer, Power Distribution Transformer 1000kva, Transformers Manufacturer, 11kv Oil Immersed Power Transformer, 1000 Kva Transformer With Price,